Shiinaha Automatic Cup Nooca Mashiinka Mashiinka Buuxinta Line iyo alaab-qeybiyeyaasha. Higee
Khadka mashiinka buuxinta dareeraha ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa noocyada dareeraha ah ee kiimikada, kiimikada maalinlaha ah, cuntada iyo warshadaha kale. Oo ay ku jiraan buuxinta iyo xirashada. Waxaan ku qalabeyn karnaa khadka oo dhan min feeder ilaa dhalada ururiyaha leh khadka wax soo saarka oo dhameystiran.
Nooca Koobka Nooca Koobka Kiimikada ah ee Fulin Kiimikada Khadka Tooska ah
Mashiinnada mashiinnada wax lagu buuxiyo ee dareeraha ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa buuxinta dareeraha maalin kasta kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale. Waxaa lagu buuxiyaa bamka masaafada saxda ah ee saxda ah wuxuuna ku habboon yahay qalab kala duwan iyo dhalooyin kala duwan. Mashiinkaani wuxuu ku xirmi karaa mashiinka mashiinka aan goyn karin iyo miiska quudinta iyo miiska ururinta dhalada. Qaab dhismeedka mashiinku waa mid fudud oo macquul ah, fududahay in la shaqeeyo, daboolka boodhka ayaa ikhtiyaari u ah baahida macmiilka.
● Dhammaan kontoroolka korantada waxay waafaqsan yihiin heerarka caalamiga ah, qaybaha ugu muhiimsan waa qaybo dibedda laga keenay, xakameynta soo noqnoqoshada, iyo xawaaraha socda si joogto ah ayaa loo hagaajin karaa.
Volume Buuxinta mugga si caqli gal ah ayaa loo xakameeyaa, taabashada shaashadda ayaa muujin karta awoodda buuxinta. Waad dejin kartaa mugga buuxinta kala duwan iyadoo loo eegayo awoodda dhalada ee kala duwan.
● Aad ayey u fududahay in la shaqeeyo iyadoo aan wax laga beddelin qaybaha.
Head Madaxa khaaska ah ee ka-hortagga faleebada, saamaynta wanaagsan ee ka-hortagga daadinta iyo rar sax ah.
Bottle Ma jiraan dhalo aan wax la buuxin, dhalo lahayn wax goyn iyo dhalo xirid la'aan.
Head Madaxa buuxintiisa wuxuu si qoto dheer ugu jiraa dhalada 2/3, ka dibna kor u kac inta lagu jiro buuxinta si looga hortago xumbo saameyn dareere ah.
Protection Badbaadinta culeyska iyo shaqada qaylo-dhaanta, ammaan badan oo lagu kalsoonaan karo.
System Nidaamka oo dhan waxaa xukuma PLC. Shaashadda taabashada midabka ayaa ka dhigaysa hawlgalka mid fudud.
Part Qaybta ugu badan ee mashiinka waxaa laga sameeyaa SS304. Qalab gaar ah oo awood u leh inuu gaaro heerka GMP.
Cyl Mashiinka mashiinka sare ee saxda ah oo leh madaxa madaxa hooseeya, naqshad qaabaysan, nolol dheer oo mashiinka mashiinka ah.
Ogaanshaha otomaatiga ah ee soo-gelinta iyo soo-saarka dhalada ee dareeraha sawir-qaadaha, iswaafajinta otomaatiga ah ee mashiinka ficilka.
Hore: Khadka Mashiinka Buuxinta Shaambo otomaatig ah
Xiga: Mashiinka Khadka Tooska ah ee Tooska ah
Mashiinka Buuxinta Aalkolada
Mashiinka Buuxinta Nadiifinta Gacanta
Mashiinka Buuxinta Nadaafadda